आकर्षक महिला/पुरुषका बारेमा कसले के भने ? - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
युवा लेखक सुबिन भट्टराईले मिस नेपाल वल्र्ड श्रृंखला खतिवडालाई सर्वाधिक आकर्षक महिलाको सूचीको पहिलो नम्बरमा राखे । उनले मीठो मुस्कान, नरम आवाज र सरल व्यक्तित्वकी धनी श्रृंखला सुन्दरताको परिचायक बन्न पुगेकी उल्लेख गरे । भट्टराईको रोजाइमा आँचल शर्मा, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहदेखि स्वस्तिमा खड्का र नम्रता सापकोटा आदि परे । विज्ञापन व्यवसायी रोशन प्रसाईं तथा भिडियो एडिटर भरत रेग्मीले पनि श्रृंखलालाई पहिलो नम्बरमै भोट गरे ।
निर्देशक दिवाकर भट्टराईले सर्वाधिक आकर्षक महिलाको पहिलो नम्बरमा श्रृंखला खतिवडाको पक्षमा मत दिए । उनले अभिनेत्री दीपिका प्रसाई, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, प्रियंका कार्की, अदिती बुढाथोकी, हिमानी शाह आदिलाई भोट गरेका छन् ।
चर्चित अभिनेता दिलीप रायमाझीले श्रृंखलालाई आन्तरिक र बाह्य सुन्दरताका लागि पहिलो नम्बरमा भोट दिए । उनको रोजाइमा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीदेखि गायिका मेलिना राईसम्म छन् । बैंकर अनिलकेशरी शाहको रोजाइमा साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह पहिलो स्थानमा छिन् । त्यसपछि उनले मिस नेपाल युनिभर्स मनिता देवकोटा, श्रृंखला खतिवडा, नम्रता श्रेष्ठ, केकी अधिकारी आदिलाई भोट गरेका छन् ।
सौन्दर्यविद् तथा चिकित्सक डा. सुशील कोइरालाले हिमानीलाई घर्कंदो उमेरमा पनि ‘सेक्सी र ब्युटिफुल’ भन्दै उनको सुन्दरताको प्रशंसा गरेका छन् । डा. कोइरालाले मिस नेपाल वल्र्ड श्रृंखला खतिवडादेखि इन्दिरा जोशीसम्मको नाम राखे ।
म्युजिक भिडियो निर्देशक तथा पब्लिसिटी डिजाइनर शान थापाले सुन्दरता, देशभक्ति, सामाजिक सोच एवं सरलपनका लागि हिमानी शाह अनि सुन्दर तथा आत्मविश्वासी भएकीले श्रृंखला खतिवडालाई छनौट गरे । अर्का म्युजिक भिडियो निर्देशक गम्भीर विष्टले प्रियंकालाई भोट दिए । उनले वर्षा राउत, हिमानी शाह, केकी अधिकारी आदिको पक्षमा पनि मत जाहेर गरेका छन् ।
क्रिकेटर सुवास खकुरेलको छनौटमा मनिता पहिलो नम्बरमा परिन् । उनले साम्राज्ञीदेखि श्रृंखलासम्मलाई भोट गरे । चर्चित भिडियो एडिटर साहिल खानले साम्राज्ञीको सुन्दरताको प्रशंसा गर्दै पहिलो नम्बरमा भोट दिए । फोटोग्राफर एन्जिल मास्केको रोजाइमा पनि साम्राज्ञी पहिलो नम्बरमा थिइन् । भिजे सुशील नेपालले पहिलो नम्बरमा प्रियंका कार्कीको नाम लिए भने दोस्रोमा श्रृंखलालाई रोजे । उनले अदिती बुढाथोकी, मेलिना राई, साम्राज्ञी आदिलाई पनि भोट दिएका छन् ।
अभिनेत्री ऋचा शर्माले पारस खड्काको स्पोर्टम्यानसिप र आकर्षक लुकको प्रशंसा गर्दै पहिलो नम्बरमा मत दिइन् । कोरियाग्राफर आश्ना अवस्थीले पनि नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि लान पारसको भूमिका उत्कृष्ट भएको भन्दै पहिलो नम्बरमै भोटिङ गरेकी छिन् । निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाको पहिलो रोजाइमा क्युट लुकका अनमोल केसी छन् ।
अभिनेत्री माल्भिका सुब्बाले युवा स्टार अनमोल केसीलाई भोट दिएकी छिन् । त्यसैगरी उनले क्रिकेटर पारस खड्कादेखि अभिनेता प्रदीप खड्का आदिलाई समेत मत दिएकी छिन् । कोरियोग्राफर तथा मेकअप आर्टिष्ट रश्मिको रोजाइमा सन्दीप लामिछाने, अनमोल केसी, आशिरमान देशराज, पारस खड्का, प्रदीप खडका, कुलमान घिसिङदेखि युवा गायक स्वप्न सुमनसम्म छन् ।
मेकअप आर्टिष्ट नन्दा अधिकारीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मुख्य भूमिका खेलेको उदाहरणीय ब्यक्तित्व भन्दै कुलमान घिसिङलाई पहिलो नम्बरमा राखिन् । अभिनेत्री आरोही शर्माले सन्दीप लामिछानेलाई पहिलो रोजाइमा राखेकी छिन् भने मोडल शिक्षा संग्रौलाको रोजाइमा अनमोल पहिलो स्थानमा छन् । चिकित्सक अनिता दाहालले कुलमान घिसिङ, सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का आदिको भूमिकाको प्रसंशा गर्दै मत दिएकी छिन्, अभिनेत्री तथा मोडल सुपुष्पा भट्टको रोजाइ पनि सन्तुलित किसिमको छ ।
गायिका मीना निरौलाले आकर्षण पुरुष छनौटमा ह्युमरस व्यक्तित्व भन्दै सन्दीप क्षेत्रीको नाम लिइन् । उनले आकर्षक व्यक्तित्व र राम्रो क्रिकेटर भएका कारण पारसका पक्षमा पनि मत जाहेर गरिन् । युवा व्यवसायी निकिता आचार्यले क्रिकेटमार्फत संसारभर नेपालको ख्याति बढाएकोमा सन्दीपलाई पहिलो स्थानमा राखिन् । उनले युवा गायकद्वय नितेशजंग कुँवर र निशान भट्टराईको स्वरको प्रसंशा गरिन् ।
कोरियाग्राफर तथा निर्देशक रेनशा वान्तवा राईलाई कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय गुणले तान्यो । त्यसैगरी, उनले पारस खड्का, विपिन कार्की आदिलाई आकर्षक पुरुषका रूपमा भोट गरिन् ।
फेसन डिजाइनर एलिसा श्रेष्ठको रोजाइमा पनि कुलमान पहिलो स्थानमा थिए भने फेसन डिजाइनर खुश्बु रानाले सौगात मल्ललाई भर्सटाइल अभिनेताका रूपमा पहिलो स्थानमा राखिन् । यस्तै, रंगकर्मी इष्टु कार्कीले ठूलो युवा प्रतिभा भन्दै पहिलो भोट सन्दीपलाई दिएकी छिन् ।
चर्चित युवा लेखक सरस्वती प्रतीक्षाले पहिलो रोजाइमा कुलमान घिसिङलाई राखिन् । ‘घिसिङ उज्यालो नेपालको परिकल्पना साकार तुल्याउने प्रतिभा हुन्,’ दोस्रो स्थानमा पारसलाई राख्दै उनले भनेकी छिन्, ‘पारसले सुस्ताएको नेपाली खेल जगत्मा पुनर्जागरण ल्याउँदै नेपाली क्रिकेटलाई विश्वस्तरमा स्थापित गराउने अह्म कार्यको नेतृत्व उनले गरेका छन् ।’